April 2018 – Page2– Trend.com.mm
နုနယ်ပျိုမျစ်လှပဖို့ ဒီအချက်တွေရှောင်ကြစို့ (ဖူးသစ်လန်းဆန်းတဲ့အလှကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ….)
Posted on April 29, 2018 April 24, 2018 by San Wadi Hnin
ကာရံတွေနဘေတွေတေးထပ်တွေနဲ့ တပ်ပစ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေး လှရဲ့မဟုတ်လား။ ဒီ Article ရဲ့ဦးတည်ရာကတော့ ခေါင်းစဉ်မှာထင်းထင်းကြီးဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ နုနယ်ငယ်ရွယ်လန်းဆန်းတဲ့အလှကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ရှောင်ရှားရမယ့်အချက်လေးတွေ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Girls' Fashion, LifestyleLeaveaComment on နုနယ်ပျိုမျစ်လှပဖို့ ဒီအချက်တွေရှောင်ကြစို့ (ဖူးသစ်လန်းဆန်းတဲ့အလှကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ….)
Posted on April 28, 2018 April 24, 2018 by Shun Lei Phyo
တစ်ချို့သောသူတွေဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးကို တစ်နေ့တစ်နေ့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တိုင်းလုပ်ဆောင်ရင်းငြီးငွေ့တတ်ကြတာမျိုး စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်တတ်ကြတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာသိပ်တော့သဘာဝကျတဲ့ကိစ္စကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ကျေနပ်မှုမရှိပဲငြီးငွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအချက်လေးတွေနဲ့စတင်ပြင်ဆင်သင့်ပြီလဲဆိုတာ… (၁) အပြင်များများထွက်ပါ အပြင်များများထွက်ပါ၊ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ပျင်းလိုက်တာ…ဒီနေ့လည်းအရင်နေ့တွေကလိုပဲဖြတ်သန်းရအုံးမယ်…ဆိုပြီးနေ့စဉ်ဘ၀ကိုငြီးငွေ့နေတတ်ကြသူတွေအဖို့
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ လူတွေဆိုတာအိုလာကြစမြဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအိုမင်းရင့်ရော်တဲ့နေရာမှာ သူများတွေထက်ပိုပြီးကိုယ်ဟာ အအိုမြန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် အအိုမြန်လာပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ လက္ခဏာတစ်ချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစ်ခြားသူတွေထင်ပိုပြီးအအိုမြန်လာပြီဆိုတာဘာတွေကပြောပြနေလဲ…
Posted on April 28, 2018 April 23, 2018 by Shun Lei Phyo
မိန်းကလေးတွေတစ်ယောက်ဟာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ကြီးနှစ်နှစ်ကာကာချစ်မိသွားပြီဆိုရင် ဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်….ဆိုတော့ ဘယ်လိုလေးတွေပါလိမ့်….. (၁) သတ္တိတွေရှိလာတယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်(သို့)မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူတကယ်ချစ်မိသွားတဲ့ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ အရင်ထက်သတ္တိတွေပိုရှိလာတတ်ကြပါတယ်။ဘယ်သူခွဲခွဲတို့မကွဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိလာတတ်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ကောင်မလေးတွေတကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင်
Posted on April 28, 2018 April 26, 2018 by Shun Lei Phyo
လူတိုင်းစိတ်ကျန်းမာပြီးကိုယ်ချမ်းသာချင်ကြသူကြီးပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲပြည့်ဝကြွယ်ဝနေပါစေ ကျန်းမာစွာမနေထိုင်နိုင်ရင်ပျော်ရွှင်မှုအစစ်မှန်ကိုရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနေကြတဲ့သူတွေရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာ ကို သိရှိစေဖို့ ကျန်းမာပျေ်ာရွှင်နေကြသူတွေရဲ့အနီးစပ်ဆုံးလျို့ဝှက်ချက်အနည်းငယ်ကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on လောကကြီးရဲ့အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်ကြသူများ
မိန်းကလေးအများစု ရူးခါနေအောင်မှားယွင်းနေကြတဲ့ အလှအပရေးရာတွေ
Posted on April 28, 2018 April 24, 2018 by San Wadi Hnin
အလှအပဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ကျက်သရေပါ။ မျက်နှာပြောင်နဲ့နေရတာပဲကြိုက်ပါတယ် မသိဘူး မိတ်ကပ်တွေမလိမ်းဘူးဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်းရှိနိုင်ပေမယ့် ဒါက ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးအများစုကတော့ အလှအပကိုရူးသွပ်ကြပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on မိန်းကလေးအများစု ရူးခါနေအောင်မှားယွင်းနေကြတဲ့ အလှအပရေးရာတွေ
Posted on April 28, 2018 April 19, 2019 by San Wadi Hnin
မိန်းကလေးအများစုက အစားမက်၊အအိပ်မက်တဲ့အပြင် နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့အလိုလိုဝိတ်ကျသွားဖို့ကိုဘုရားမှာဆုတောင်းနေတတ်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူလေးတွေပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတော့ ကျချင်တယ်။မစားပဲကျမနေနိုင်။ ခိုးချင်လိုက်တာလည်းပျာလို့..လက်နှေးလိုက်တာလည်း ချာလို့…ဆိုတဲ့အတိုင်း ပိန်ချင်လိုက်တာလည်း ပျာလို့.. » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on အိပ်စက်ချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်
Posted on April 28, 2018 April 26, 2018 by San Wadi Hnin
လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိုးပဲလေ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်တွေအကြာကြီးရန်မဖြစ်ပဲငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာက တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ဖက်သတ်ကြီးသည်းခံနေတာကလွဲရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ သည်းခံနေတဲ့တစ်ယောက်က သည်းခံရပါများလို့ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခရီးလမ်းဟာ ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ အဆုံးသတ်ကိုရောက်သွားမှာပါ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on သင့်ချစ်သူနဲ့ရန်မဖြစ်ခင် သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ
Posted on April 28, 2018 April 27, 2018 by San Wadi Hnin
ဝက်ခြံတွေကတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာတစ်နေရာမဟုတ်တစ်နေရာပေါက်နေကြတာပါပဲ။ ပေါက်လိုက်အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့လိုက်၊ပျောက်လိုက်၊ထပ်ပေါက်လာလိုက်ပေါ့လေ။ ဒါက လူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးနီးပါးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အရေပြားပြဿနာတစ်ခုပါ။ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေကလည်းတံဆိပ်တွေမှအမျိုးအမည်ကိုစုံလို့.. ဒီကြားထဲ ဝက်ခြံပျောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ၊လိမ်းဆေးတွေကရှိသေးတယ်။အခုခေတ်အရေပြားအထူးကျွမ်းကျင်သူတွေဆိုသည်မှာလည်း ဝက်ခြံတစ်ခုနိုင်ရင်ကိုအတော်ဟုတ်နေတော့တာ.. » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ဝက်ခြံတွေကိုတော့ဖြင့် လျှော့မတွက်စေချင်
အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ငယ်လေးလုံး ဖန်တီးဖို့စဉ်းစားနေသူတို့အတွက် ချစ်စဖွယ် အိမ်လေးများ
Posted on April 27, 2018 by Wint
စိတ်ကူးယဉ်ဖူးလား … နောက် နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ဆို ငါ့ရဲ့ အိမ်လေးက ဘယ်လိုဆိုပြီး တွေးခဲ့မိတာလေးတွေများ ရှိလား? » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ငယ်လေးလုံး ဖန်တီးဖို့စဉ်းစားနေသူတို့အတွက် ချစ်စဖွယ် အိမ်လေးများ